मोदीको भाषण: जुनसुकै भाषामा पनि खररर कसरी ? यस्तो छ रहस्य - Nepali Virals
११ फाल्गुन २०७२, मंगलवार १५:४०	2,877 पटक-पढिएको
मोदी जुन समुदायमा पुग्छन त्यही उनको हाइहाइ हुन्छ । त्यसो त नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनको भाषण सुनेर धेरैले मुक्तकण्ठले प्रंशसा गरे । मान्छेलाई मोहित पार्न र बडी ल्याङ्गोएजका लागि निकै माहिर मोदी अंग्रेजीमा समेत खररर भाषण गर्छन । उनको अंग्रेजी भाषण सुनेर पश्चिमेलीहरु सम्म अचम्ममा पर्ने गरेका छन् । घोकेर/कण्ठ गरेर गरेको भाषण स्रोता/दर्शकले सहजै चाल पाउन सक्छन तर मोदीले दर्शकदीर्घामा हेर्दै निर्धक्क मख्ख पर्ने भाषण गर्छन कसरी ? के तपाईलाई थाहा छ ? उनले लेखेको भाषण नै पढ्ने हो तर उसको नजिक कुनै कागज देखिदैन । त्यसैले दर्शकहरु झुकिन्छन तर उनले दर्शक/स्रोतालाई ‘उल्लु’ बनाइरहेको कसैले चाल पाउदैनन । आखिर रहस्य चाही के त ?
नेपालका प्रधानमन्त्री यति बेला भारत भ्रमणमा छन् । भ्रमणको बेला उनले केहि पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो भनाइ राखेका छन् । आफ्नो भनाइ राख्दा उनी प्राय लिखित भाषण पढ्छन् । यस्तै दृश्य मोदी-ओलीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि देखियो । ओलीले लिखीत् भाषण पढे भने मोदीले कुनै कागज वा पेपर ल्याएका थिएनन् ।
कुनै कागज वा पेपर नहेरी हिन्दी र अंग्रेजी दुवैमा सहज भाषण कसरी गर्छन् होला भन्ने कौतुहल सबैको मनमा छ । उनको भाषणले कैयौ मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । उनको यस्तो वाकशैली पछाडी लुकेको छ एउटा प्रबिधि । त्यहि प्रविधिले नै उनी कतै नअड्की दर्शक तथा क्यामरातर्फ हेरेर सजिलै भाषण गर्छन ।
के हो त्यो प्रबिधि ?
माथिको तस्विर ओली र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको हो । त्यहाँ ओलीले सिधा हरियो रङ्गले गोलो लगाईएको स्ट्यान्डमा हेरीरहेका छन् । त्यो टेलीप्रोम्पटरको स्क्रिन हो । त्यहाँ पहिले नै टाइप भएको अक्षर देखिन्छ जुन वक्ताले मात्र हेर्न मिल्छ अर्थात् त्यसमा भएका अक्षरहरु अगाडीबाट मात्र देखिन्छ ।
पछाडीबाट हेर्दा त्यो सामान्य सिसा जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ प्रयोग हुने सिसालाई Beam splitter Glass भनिन्छ । त्यसमा प्रोजेक्टर अथवा आई पोड, आई प्याड अन्य कुनै ग्याजेटमा लेखिएको अक्षर आउछ र भाषण गर्ने वक्ताले त्यो हेर्दै गर्छन् । पछाडी राखिएको क्यामराले वक्ताको अनुहार मात्र खिच्छ किन भने क्यामेराको लेन्सले त्यो डिटेक्ट गर्दैन ।
यो नै हो हरेक पटक मोदीले जादुगर भाषण गर्नुको रहस्य । उनी पहिले नै लेखिएको भाषण पढ्छन् तर यस ’bout धेरैलाई थाहा हुदैन । टेलीप्रोम्पटरको दर्शकहरु आँखामा हेर्दै प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकी यो आँखाको लेभल मै राखिएको हुन्छ । बिश्वका प्राय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले भाषण गर्दा यहि प्रबिधि प्रयोग गर्छन ।
यी टेलीप्रोम्पटरको दुवै साइडमा राखिएको हुन्छ । ताकी वक्ताले दुवै साइडका दर्शकहरु हेर्दै आफ्नो भाषण गर्न सकोस । मोदी मात्रै होइन अमेरिकी राष्ट्रपति बरक ओबामा लगायत ठूल्ठूला विशिष्ट व्यक्तिहरुले ठूला कार्यक्रमहरुमा यो प्रबिधिको प्रयोग गर्ने गर्छन ।
यदि तपाईलाई कुनै भाषणले वक्ताले कण्ठ गरेर आएको छ जस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रम हो । नेपालमा भने यो प्रविधि प्रयोग भएको पाइदैन ।
हेर्नुहोस् मोदीले टेलीप्रोम्पटरको प्रयोग गर्दाको एक भिडियो
टेलीप्रोम्पटरमा हेरेर भाषण गर्दै ओबामा
अघिल्लो चुइंगमका १० बिचित्र कहानी
पछिल्लो हरेक नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो भारतले गरयो निषेध